Acer Swift 5 sy Swift 3: kahie kely maivana vaovao an'ny marika | Vaovao momba ny gadget
Nanavao ny isan'ireo kahie Swift ultrathin i Acer
Eder Esteban | | solosaina, portable
Acer dia mbola mamela antsika amin'ny vaovao momba ny fampisehoana azy ao amin'ny IFA 2019. Ny orinasa dia manolotra ireo maodely vaovao ao anatin'ny faritra misy ny ultraportables Swift. Ity karazana modely ity dia fantatra amin'ny kahie manify sy maivana, izay mitazona fahombiazana tsara ihany koa. Voahosotra ho iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny orinasa izy hatreto.
Amin'ity laharana havaozina ity ny orinasa mitazona ny toetra mahazatra ny mitovy. Mahita endrika kanto sy voadio isika, maivana ny lanjany, saingy manana fiainana bateria tena tsara. Ka azon'izy ireo antoka fa ho lasa fahombiazana vaovao ho an'i Acer, satria io sokajy io dia namela maodely tsara ho antsika.
Ity indray mitoraka ity avelany anay miaraka amin'ny solosaina finday roa ao anatin'io faritra io, toy ny efa voamarina. Ny orinasa dia nanolotra ny Swift 5 sy Swift 3 amin'ity hetsika ity ao amin'ny IFA 2019. Samy manana ny famaritana azy ireo izy roa, noho izany dia hiresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo izahay amin'ity tranga ity.
1 Acer Swift 5: ny solosaina finday 14-hazavana maivana indrindra
2 Acer Swift 3: Mahery sy mahomby
3 Vidiny sy misy
Acer Swift 5: ny solosaina finday 14-hazavana maivana indrindra
Ny maodely voalohany amin'ity sokajy ity dia ny Acer Swift 5. Ity laptop ity dia fantatra fa maivana indrindra amin'ny kilasiny hatramin'ny nanombohany, zavatra mijanona indray, satria 990 grama fotsiny ity taranaka vaovao ity. Mandritra ny fihazonana ny hateviny tena manify, izay mahatonga azy io tsara hitondra miaraka amintsika na aiza na aiza. Modely tsara amin'ity lafiny ity ho an'ireo mpampiasa.
Ity laptop ity dia manana efijery 14-inch Full HD IPSiii. Ao anatiny dia miaraka amina processeur Intel Core i7-1065G7 andiany faha-2501 ary manana safidy hampiasa sary NVIDIA GeForce MX512 tsy miankina. Ho fanampin'izay, manana fanohanana 3 GB farafahakeliny fitehirizana PCIe Gen 4 × 3.1 SSD izy. Ilay kahie koa dia misy mpampitohy USB3 Type-C feno, izay manohana ny Thunderbolt 6, Intel Wi-Fi 802.11 dual-band (XNUMXax), ary Windows Hello amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tànana.
Ity Acer Swift 5 ity dia safidy mety ho an'ireo mandeha be dia be. Satria maivana io, nefa manome fahaleovan-tena tsara hatramin'ny 12,5 ora. Lavitra, ny solosaina finday dia manana safidy hampiasa famandrihana haingana, izay mamela fa mandritra ny 30 minitra fiampangana dia mahazo bateria ampy hiasa 4,5 ora izahay. Manao azy io ho an'ireo mandeha be dia be.
Acer Swift 3: Mahery sy mahomby
Ny maodely faharoa amin'ity sokajy ity dia ny Acer Swift 3, izay miavaka amin'ny maodely kanto sy maivana. Manana a Fampisehoana 3-inch Full HD IPS14. Modely maivana iray hafa, milanja 1.19kg ary 15,95mm fotsiny ny hateviny. Ka maodely tsara hafa izany hitondrana miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny dia sy ahafahana miasa na aiza na aiza.
Ity solosaina finday ity dia mampiasa processeur Intel Core i7-1065G7 Taranaka faha-250 ary misy sary Intel Iris Plus ary NVIDIA GeForce MX512 tsy miankina GPU mijoro. Fanampin'izay, dia ahitana tahiry 3GB an'ny PCIe Gen 4 × 16 SSD, 4GB RAM LPDDR3X, Thunderbolt 6, ary Intel Wi-Fi 12,5 misy tarika roa. Ny fizakan-tena dia lafiny iray hafa niavakavahany, izay hanome antsika hatramin'ny 4 ora fizakan-tena. Izy io koa dia manana famandrihana haingana, izay ahafahan'ny fizakan-tena maharitra 30 ora miaraka amin'ny famandrihana XNUMX minitra.
Ity laptop ity dia aseho ho safidy mety tsara hiasa, fa natao ho an'ny fialamboly ihany koa. Manome antsika loko mazava sy mazava izy amin'ny fotoana rehetra. Azo atao izany noho ny fampiasana teknolojia roa lehibe ao anatiny, dia ny teknolojia Acer Color Intelligence sy Acer ExaColor ho an'ny sary maranitra sy nohatsaraina. Misaotra azy ireo ianao nahazo ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra.
Acer dia nanamafy tamin'ity famelabelarana ity tao amin'ny IFA 2019 fa hamidy ity faritra ity amin'ny volana septambra amin'ity taona ity. Ny Swift 5 dia havoaka amin'ny vidiny 999 euro any amin'ny magazay, raha ny Swift 3 kosa dia ho mora vidy kokoa, 599 euro ny vidiny. Raha liana amin'ity faritra ity ianao, afaka andro vitsivitsy dia azo vidiana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » portable » Nanavao ny isan'ireo kahie Swift ultrathin i Acer
ConceptD: karazana kahie matihanina an'ny Acer
Predator Triton 300: solosaina finday vaovao an'ny Acer